AIZA NO ALEHA : CCESCA – Antanimena -
AccueilVaovao SamihafaAIZA NO ALEHA : CCESCA – Antanimena
30/09/2017 admintriatra Vaovao Samihafa 0
Fampiaraham-peo nikoizana tany amin’ny taona 60. Hamerina indray ny fiarahany taloha i Henri Ratsimbazafy sy Voahirana. Fampisehoana indroa miantaona no atolotr’izy ireo amin’izany etsy amin’ny CCesca Antanimena ny 29 septambra amin’ny 7 ora sy sasany , ary ny 1 oktobra amin’ny 3 ora. Santionany amin’ny fampiaraham-peo hanakoako mandritra ireo andro roa ireo ny « Taiza », « Indro tazako », « Manimanina », « Ianao », « Lamba blanc »… Ireo efa zokinjokiny dia nahatsiaro tsara ny fahaizan’izy mianadahy ireto mitsikombakomba amin’ny fanehoana ireo fihetsika samihafa atao eny an-tsehatra. Amin’ny endrika nahafantarana ireo hira ireo tamin’ny fotoan’andro nampalaza azy no ezahan’izy ireo hiangaliana izany indray. Nampiavaka azy ireo rahateo ny fitondrana ireo hira mitantara ny zava-misy eo amin’ny fiainan’ny malagasy, indrindra ny lafin’ny fitiavana. Mahatsiaro ho mijery tantara an-kira matetika ireo manatrika ny seho. Hanampy azy ireo eny an-tsehatra ry Anja Ratsimbazafy, Andry Andriamaniraka, Gérard Ratsimiseta, Solofo Bota, ary Poon.
Trass – Tsiadana
Hiavaka tsy toa ny mahazatra ny tolotra omen’ny Trass Tsiadana, anio alina. Hisokatra ho an’ny rehetra ny sehatra , ary afaka hampiara-peo amin’i Rija Ramanantoanina izay liana ny amin’izany. Eo am-piandrasana ny mpijery hiaka-tsehatra anefa dia hifantoka amin’ny fanentanana sy ny fiangaliana ny hira ity mpanakanto ity. Maro amin’ireo sangan’asan’i Rija Ramanantoanina no hiarahany amin’ny mpanakanto hafa. Tsy manakana koa anefa izany ny hiitaran’ny fampiaraham-peo amin’ny hirana mpanakanto hafa.
Hifamotoana etsy Antsahamanitra indray rahampitso tolakandro manomboka amin’ny 4 ora ireo mpiondana hip hop sy ny mozika rap ao anatin’ilay hetsika « Afon-dasy legend ». Ireo tarika sy mpanakanto nanomboka nitrandraka ny hip hop sy ny rap teto Madagasikara no hifandimby hanafana ny sehatra. Handray anjara amin’ity hetsika ity ry Big Jim Dah, Raboussa, Da Hopp ary Krutambull. Hanakoakoa indray ny fampisehoana ireo hira nahafantarana ireo tarika ireo tany am-piandohana.
Club Nautique – Ivato
Tafiditra amin’ireo hetsika entina hamaranana ny fotoam-pialan-tsasatra. Hotanterahina eny amin’ny Club Nautique Ivato ny alahady tontolo andro izao ny « Lanonam-be bye bye Vacances ». Mpanakanto manana ny lazany sy ankafizin’ny tanora amin’izao fotoana no nantsoin’ny mpikarakara hanafana ny lanonana. Hifandimby hanafana ny sehatra ry Gangsta Bab, Lôla, Stéphanie, Eldiot, Lion Hill, ary Shyn. Hanentana ny seho amin’ny resabe sy ny hatsikana kosa i Françis Turbo.
Minisiteran’ny Kolontsaina – Anosy
Tafiditra amin’ny fanamarihana ny andro eran-tany ho an’ny mozika. Tanterahina ny tonolo andro eny amin’ny tokotaniben’ny minisiteran’ny Kolontsaina eny Anosy ny hetsika Hay, izay karakarain’ny Voots Kongregation. Hisy sehatra roa ho an’ireo mpanakanto manana ny talentany nefa tsy tazana loatra noho ny afitsoky ny « matraquage » no omena sehatra. Ny maraina dia ireo mpanakanto vao misondrotra notsongaina avy amin’ny fifantenana no hiaka-tsehatra, ireo mivoy sy mitrandraka ny gadona nentin-drazana kosa ny tolakandro amin’ny sehatra be. Handray anjara amin’izany ry Sarandra Belobo, Nindry (zanak’i Remanindry), Uxt, Marolafy, Loharano…